HAG OO AFKA CIIDA U DARTAY PUNTLAND | allsanaag
HAG OO AFKA CIIDA U DARTAY PUNTLAND
Shuruudda lagu xiray in Warsangeli iyo Dhulbahante ay Xiildhibaano ka helaan aqalka sare waa mid aan caddalad ahayn dastuurka Soomaaliyeedna ka hor imanaysa
Beelaha Warsangeli iyo Dhulbahante in Xildhibano ka helaan Aqalka sare waxa lagu xiray oo xujo looga dhigay
In Maamul goboleed kasta uu helo Sadxe xildhibaan oo kale
In beesha Fiqi shini oo ah beesha qura oo Hawiye ka degta waqooyiga Soomaaliya xaafad ka mid ah magaalada Adhicadeeye ee Gobolka Sool ay iyaguna ka helaan Aqalka sare hal Xildhibaan. Maamul goboleedyada sadexda Xildhibaan ee loogu daray mid ka mid ah waxa loo qoondeeyey beesha Shanaad,
Hadaba Xildhibaanaddi Sool iyo Sanaag ee maqnaa xagee la geeyey?
Sadexdii Xildhibaan ee Sool iyo Sanaag ee ka imanayey waqooyiga Soomaaliya, labo ka mid ah waxa hadda lagu daray Puntland. Halka Dirta waqooyi sadexddii Xildhibaan oo horay ugu maqnaa loogu daray sadex kale oo siyaado ah, maanta waxay haystaan 14 Xildhibaan oo Hawiye iyo Raxanweyn u xalaaleeyeen, oo Irirsamaale qura u gooniya. Beesha Dhulbahante oo ugu badan gobolka Sool xildhibaanadoodii waxa lagu daray Puntland. Halka beesha Fiqi shini oo xaafad ka degan gobolka Sool iyaga Xildhibaan Irir samaala ahaan loogu macmalay loogu daray waqooyiga Soomaaliya.
Hadaba yaa dhacan oo afka ciida loo daray?
Maamulka Puntland ayaa dhacan oo afka ciida loo daray, sababtuna waa
Maamulka Puntland ee ka kooban Gobolada Sool, Sanaag, Bari, Nugaal , inta badn Mudug iyo degmada Buuhoole waxay ka haystaan aqalka sare 14 Xildhibaan. Halka Nus Mudug ah, Galguduud Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ay ka haystaan Aqalka sare 22 Xildhibaan. Sidoo kale sadexda gobol ee Togdheer, Waqooyi galbeed iyo Awdal ayaa isku xildhibaano ah Puntland. Waxayna haystaan 14 Xildhibaan.
Ugu danbayntii madashii horeee Soomaaliya, gobolada waqooyi waxa loogu daray sadex Xildhibaan, si gobolada Sool iyo Sanaag saamigooda oo sadex xildhibaan ah u siiyaan, Maanta madashu mar labaad 18 xildhibaan ayaa maamul goboleedyada loogu daray si gobolada Sool iyo Sanaag saamigooda u helaan. Madashii go’aamadan lagu go’ynayey waxa fadhiya bulshada caalamka oo Sool iyo Sanaag ku sheegta inay dhul laysku hayso. Hadaba haddi xildhibaanaddi aqalka hoose iyo aqalka sare ee labada gobol ee Sool iyo Sanaag ay ka soo baxeen Puntland. Waa in la sameeyaa xujo ah ah doorasho Puntland ka dhicin inta Bulshada caalamku ay ka aqoonsanayaan Sool iyo Sanaag halka ay raacsan yihiin iyo halka loo soo marinayo kaalmooyinka caalamku ugu deeqo
← Cunta kariyihii reer Xasan Culusoow oo Xildhibaan ku guulaystay qurbe joogta gobolka Sanaag ayaa 11 kun oo doolar soo gaarsiiyay jimciyada Salaam →